बेलायतमा अर्को भाइरस भेटियो : के हो मन्कीपक्स ? कस्तो हुन्छ र यो कति खतरनाक ? – Namaste Host
June 15, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on बेलायतमा अर्को भाइरस भेटियो : के हो मन्कीपक्स ? कस्तो हुन्छ र यो कति खतरनाक ?
संसार यतिबेला कोरोना भाइरसको संक्रमणले आक्रान्त छ । यो जटिल अवस्थामा बेलायतमा अर्को एउटा नयाँ भाइरस भेटिएको छ । भाइरसको नाम हो मंकीपक्स । बेलायतको नर्थ वेल्समा एकै परिवारका दुई सदस्यमा मंकीपक्सको पुष्टि भएको छ ।अधिकारीका अनुसार सर्वसाधारणमा यसको जोखिमको खतरा कम छ । स्वास्थ्य अधिकारीले यो भाइरस विदेशबाट बेलायत भित्रिएको पनि दाबी गरेका छन् ।
मंकीपक्स भाइरसको पहिचान सबैभन्दा पहिला सन् १९७० मा अफ्रिकी देश कंगोमा भएको थियो । त्यसपछि सन् २००३ मा यो रोग अमेरिकासमेत संसारभरीका थुप्रै देशमा फैलिएको थियो